Muuse Suudi oo ku horeeya kursigii ugu xiisaha badnaa Hirshabeelle ee Aqalka Sare - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Muuse Suudi oo ku horeeya kursigii ugu xiisaha badnaa Hirshabeelle ee Aqalka Sare
Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa ku horeeya tartanka senatoornimada Aqalka sare ee kursiga uu difaacanayo.
Waxaa Muuse Suudi kursiga kula tartamay Musharixiinta kala ah; C/llaahi Sheikh Xasan, Axmed Caddow Daaci iyo Dr. Xasan Caddaay.
Codadkii la tiriyey waxaa ku horeeya Muuse Suudi oo helay 51 cod.
Axmed Daaci ayaa helay 28 cod, halka C/llaahi Sheekh Xasan uu helay 15 cod. Dr. Xasan Caddaay ayaa isna helay 2 cod.
Waxaa tartanka ka haray C/llaahi Sheekh Xasan. Waxaana si toos ah loogu gudbay wareega 3aad oo ay ku tartami doonaan Muuse Suudi iyo Axmed Daaci.
Previous articleJen. Muungaab: “Guddiga Farmaajo magacaabay waa Sharci darro iyo is-hortaag Caddaalad ee kiiska Ikraan”
Next articleRW Rooble oo jawaab culus u diray Farmaajo, kana digay marin habaabinta Kiiska Ikraan (Akhriso)